गोमेजले ६८ वर्षीय बिल मुर्रेसँग बिहे गर्ने - सुदूर नेपाल
गोमेजले ६८ वर्षीय बिल मुर्रेसँग बिहे गर्ने
Dinesh khaptadi May 20, 2019 0
एजेन्सी अमेरिकाकी चर्चित गायिका तथा नायिका सेलेना गोमेजले कान्स फिल्म फेस्टिभलमा उपस्थिति जनाएपछि उनले आफ्नो ब्युटीनेस मार्फत संसारको ध्यान तानिन् । अहिले भने उनी फेरि अर्को एक खुलासाका कारण सबैको चर्चाका विषय बनेकी छिन् ।६८ वर्षीय बिल मुर्रेले एक अन्तर्वार्तामा गोमेजको खुलेर तारिफ गरेका थिए । उनले आफू निकै मन पर्ने र सेलेना दयालु स्वभावको भएको बताएका थिए ।
सेलेनाले तस्वीर शेयरिङ एप इन्स्टाग्राममा कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी भएका तस्वीर शेयर गर्दै एउटा तस्वीरमा क्याप्सन लेखिन् – बाइ द वे, बिल मुर्रे एण्ड आई आर गेटिङ म्यारिड ।उनको यो स्टाटसले मनोरञ्जन जगतको ध्यान खिचेको छ । किनकि सेलेना बल्ल २६ वर्ष पुगिन् भने मुर्रे उमेरका हिसाबले झण्डै दोब्बर जेठा छन् ।उनले बिहीवार लेखेको यो स्टाटसले रातारात चर्चा पायो । उनको यो निर्णयमा फ्यानका विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् ।यता अर्को समाचार एजेन्सीले भने मुर्रेसँग बिहे गर्ने भनेर सेलेनाले मजाक गरेको बताएको छ ।
कान्सको रेड कार्पेटमा यी दुई कानेखुशी गरेपछि प्रेम सम्बन्धका बारेमा मिडियामा समाचार बनेका थिए । यसअघि भने सेलेनाले गायक जस्टिन बिबरसँग लामो समय सम्बन्ध जोडेकी थिइन् । पछिल्लो समयमा आएर यी दुई बीचको सम्बन्ध टुटेको थियो । त्यसपछि सेलेना लामो समय प्रेमबाट टाढा रहे पनि उनको नाम अन्य कलाकारसँग पनि जोडिएर आएको थियो ।
Previous Post: सुन्दर र जवान देखिन चाहानुहुन्छ भन्ने ? यि घरेलु उपायहरु लगाउनुहोस्
Next Post: Rip! पाँचथर घटनामा दिवङ्गत ९ जनाको रहस्य बाहिरियो